ညဘက်ဆီးခဏခဏသွားတာက သွေးတိုးရောဂါအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ သတိထား! - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ဆေးပညာနောက်ဆုံးသတင်းများ » ညဘက်ဆီးခဏခဏသွားတာက သွေးတိုးရောဂါအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ သတိထား!
ညဘက်ဆီးခဏခဏသွားတာက သွေးတိုးရောဂါအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ သတိထား!
တစ်ညတစ်ည အိပ်မရအောင်ဆီးခဏခဏထသွားနေရတဲ့သူတွေများရှိလား။ ညအိပ်ချိန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အိပ်ပျော်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေနိုင်သလို ခါန်အားတွေလည်းပြည့်စေတယ်နော်။ ကျန်းမာဖို့အတွက်လည်း အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါအရေးပါတဲ့ အိပ်စက်ချိန်မှာ ခဏခဏဆီးထသွားနေရမှတော့ တော်တော်လေးဂွကျတဲ့ကိစ္စနော်။ ဒါက ဒီလောက်နဲ့တင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ညအိပ်ချိန်မှာ ဆီးခဏခဏထသွားနေရတာက သွေးတိုးရောဂါခံစားနေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။
မကြာခဏဆီးသွားနေရတာက အမျိုးသားတွေအတွက်ရော အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါ စိတ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စပါနော်။ နေ့ခင်းမှာဖြစ်ဖြစ် ညမှာဖြစ်ဖြစ် ခဏခဏဆီးသွားနေရတာကတော်တော်လေးအဆင်မပြေတာပါနော်။ မကြာခဏဆီးသွားနေတာက နေရတာအဆင်မပြေဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်တလေမှာ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်နော်။
မကြာခဏဆီးသွားတာက လူတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားတွေ နဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးခဏခဏသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို ခဏခဏဆီးသွားစေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ခုနှစ်ခုမကပါဘူး။ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား၊ ကျား/မ ကွဲပြားမှုပေါ်လိုက်ပြီး မကြာခဏဆီးသွားနိုင်ခြေက ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို မကြာခဏဆီးသွားနေရစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဒီအချက်တွေကလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
ညအိပ်ချိန်ဆီးခဏခဏထသွားနေရတာက သွေးတိုးရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရ ညအိပ်ချိန်မှာဆီးခဏခဏထသွားနေရတာက ဆားအများကြီးစားမိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို သွေးတိုးရောဂါခံစားနေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊လို့ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ညဘက်မှာ ဆီးခဏခဏထသွားရတာကိုဖြစ်စေတဲ့ ဖြစ်နေကျအနေအထားတစ်ရပ်က အရည်သောက်များတာ (ရေကနေစလို့ အချိုရည်၊သစ်သီးဖျော်ရည်၊ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်နဲ့ အယ်လ်ကိုဟောတွေ)၊ အိပ်မရတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေတာ၊ ဆီးအိမ်ကျုံ့ဆန့်မှုများနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သာမန်လူတစ်ယောက်က ညအိပ်ချိန် ၈ နာရီအတွင်း ဆီးတစ်ခါမှ ထမသွားဘဲ အိပ်စက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ ၈ နာရီအိပ်စက်ချိန်မှာ တစ်ကြိမ်လောက်ဆီးထသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်အနေအထားပါ။ တကယ်လို့ ညဘက်အိပ်ချိန်မှာ ဆီးထသွားရတဲ့အကြိမ်ရေက ၂ ကြိမ်ကနေ ၆ကြိမ်လောက်အထိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ စဉ်းစားရမှာက ဆီးအိမ်မှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေလားဆိုတာနဲ့ ဆီးကျိတ်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေလားဆိုတာပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေထကြတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ တကယ်လို့ ဒီအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်လား သွေးတိုးတာကြောင့်လားဆိုတာကို သိချင်ရင်လုပ်လို့ရမယ့် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဆားပမာဏကိုလျှော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလိုလျှော့ကြည့်လိုက်လို့ ညဘက်ဆီးသိပ်ထ မသွားရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြဿနာအရင်းအမြစ်က သွေးတိုးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။
မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတွေအရ ဆီးခဏခဏထသွားတာက အငန်စားသုံးမှုများတာကြောင့် နဲ့ သွေးတိုးနေတာကြောင့်ဖြစ်နိူင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံသားတွေက အနောက်ဥရောပနိုင်ငံကလူတွေထက် အငန်စားသုံးမှုပိုများကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါခံစားရနှုန်းကလည်းမြင့်ပါတယ်။ အချို့ဆို ကိုယ့်မှာသွေးတိုးရှိလို့ရှိမှန်းမသိတာတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နေချိန်၊ သွေးတိုးနေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ခဏခဏဆီးသွားချင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ခိုင်မာစေဖို့ သုတေသီတွေဟာ လူ ၃၇၄၉ ဦးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုရလဒ်အရ အငန်ကဲတဲ့ အစားအစာတွေစားသုံးမှုများသူတွေက ညအိပ်ချိန်မှာ အခြားသူတွေထက် ဆီးခဏခဏသွားနေရတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ညဘက်မှာ ပုံမှန်ထက် ဆီးခဏခဏထသွားနေရသူတွေက သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတယ်၊ လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှားမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ လူတော်တော်များများ အသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ သွေးတိုးတာကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ သွေးတိုးတာကလည်း အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သည်အထိဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်တာက ဆားလျှော့စားပါ။ အငန်ကဲတာတွေကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ပါ။ ကျန်းမာစွာစားသောက်တတ်တဲ့အလေ့အထကိုမွေးမြူပါ။ အရက်နဲ့ဆေးလိပ်ကိုဖြတ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိပြီး ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးပါ၊လို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းပါရစေနော်
ဒိုက်ထိုးနိုင်တဲ့ အကြိမ်ရေကိုကြည့်ပြီး နှလုံးရောဂါခံစားရနိုင်ခြေရှိ၊ မရှိ ခန့်မှန်းပြမယ်
Urination: Frequent Urination https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15533-urination–frequent-urination Acessed Date 11 April 2019
Frequent urination at night may beasign of hypertension https://www.medicalnewstoday.com/articles/324893.php Accessed Date 11 April 2019
What Causes Night Time Urination? https://www.healthline.com/symptom/night-time-urination Accessed Date 11 April 2019